Waa Kuma Yaasiin Fareey? | KEYDMEDIA ENGLISH
Nin aan laheyn tacliin waxbarasho, ama xirfad askarinimo, oo saaxiibadiis ay ku tilmaamaan "Nin aan caqli badneyn oo aan isqeybin karin", hadaba waa kuma ninkaan uu Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee Farmaajo ka dhigtay Agaasimaha Hay'adda ugu awooda badan Soomaaliya? Waa Warbixinta KEYDMEDIA.
Muqdisho – September 8, 2021: Keydmedia ayaa baaritaan ku sameysay mid ka mid ah dadka la tuhunsan yahay in uu fuliyay dilkii loo geystay Ikraan Tahliil, oo ah Yaasiin C/laahi Maxamuud oo ku magac dheer (Yaasiin Fareey).
Dadka yaqaan Yaasiin ayaa ku tilmaamay da’diisu in ay u dhexeyso 30-36, deegaan ahaanna uu kasoo jeedo gobolka Shabeelaha Dhexe.
Yaasiin waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay qof aan laheyn tacliin waxbarasho, ama xirfad askarinimo, inkastoo uu yahay sarkaal ciidanka Nabadsugidda ka tirsan. Hay’adda nabadsugidda wuxuu kaga soo biiray xiligii uu talada hayay Janaraal Tuuryare, oo ay juffo ahaan isxigaan.
Sarkaal ka tirsan Nabadsugidda, magciisana ka gaabsaday in la shaaciyo, oo ka waramaya Yaasiin Fareey ayaa yiri “Markii iigu horeysay Yaasiin Fareey waxaan ku arkay guriga Generaal Tuuryare, halkaas oo uu u qaabilsanaa in uu albaabka ka furo dadka martida ah. Waxaa la oran karaa wuxuu ahaa wiil yar oo reerka ugu yimid qaraabo-nimo, balse aan laheyn wax xirfad askarinimo ama tababar ciidan.”
Yaasiin Fareey waxaa lagu sifeeyay in uu yahay qof aan codkar aheyn, af-gaaban, oo dadka madaxda ah jecel mar walba in uu u qidmeeyo. Keydmedia oo waydiisay dadkii yaqiinay damiir ahaan, intee ayaa la oran karaa waa uu hufan yahay, ayaa ku jawaabay “Yaasiin ma ahan nin caqli badan oo isqeybin kara, mana lahan karti uu amar qaldan ku diido ama uga hor yimaado madaxdiisa.”
Farmaajo ayaa digreeto kusoo magacaabay Yaasiin Fareey xalay saqdii dhexe, maadaama uu yahay qofka kaliya ee Fahad Yaasiin u fulin jiray awaamirta baalmarsan sharciga iyo dastuurka dalka. Arrintan ayaa lagu tilmaamay in ay tahay sidii loo badbaadin lahaa Yaasiin Fareey, xogta uu hayana loo asturi lahaa.
Yaasiin ayaa noqday taliyaha ilaalada ciidanka Fahad Yaasiin, halkaas oo uu markii dambe uga dalacay mas’uuliyaddo kale oo la xiriira maamulka Hay’adda Nabadsugidda. Inkasta oo uusan laheyn xirfad iyo karti ciidan, hadana Keydmedia waxay soo ogaatay in Yaasiin Fareey uu ahaa ninka u qaabilsan Fahad xuuraanka arrimaha qabiilka reerka uu ka dhashay, gacansatadooda iyo siyaasiyiinta.
Isku-dhacyadii ugu dambeeyay ee mucaaradka iyo xukuumadda Farmaajo, Yaasiin Fareey wuxuu ku muteystay darajo kale, taas oo aheyd in uu ka daba shaqeeyay Ibrahim C/laahi Baadiyow, oo amardiido ku sameeyay Fahad Yaasiin kadib markii lagu amray in uu ka qeyb qaato weerarkii la damacsanaa in lagu qaarajiyo labada madaxweyne ee Shiikh Shariif iyo Xasan Shiikh.
Yaasiin Fareey oo aan ka laba-labeyn ayaa fuliyay amarkii taliyaha NISA, kadibna Ibraahim Baadiyoow, oo ah nin la dhashay musharaxii xilka madaxweynaha 2016-kii, ayaa halkaas ku waayay xilkiisii iyo masuuliyadii uu ka hayay Hay’adda Nabadsugidda.
Dad xog-ogaal ah ayaa Keydmedia u sheegay in Yaasiin Fareey uu damcay in uu ka baxsado magaaladda Muqdisho, una cararo dhanka South Afrika, balse C/laahi Aadan Kulane, oo loo yaqaan Kulane Jiis, ayaa ku qanciyay in uu dalka joogo, damaanad u siiyay in Farmaajo xoog iyo xeelad iskugu geynayo sidii looga beri-yeeli lahaa kiiska Ikraan Tahliil.
Keydmedia Online ayaa sidoo kale billowgii sanadkaan warbixin dheer ka qortay Fahad Yaasiin oo aan ku tilmaamnay Aabaha Argagixisadda, hadaba: